VLC-2.1.0-win64 Bit&win32 Bit...! | အိမ်လွမ်းသူ...
ကျွန်တော်ဒီနေ့ VLC-2.1.0...လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...! Update...လေးတွေသုံးချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...! ဒီကောင်လေးအကြောင်းကတော့ အားလုံးသိပြီးသား ဖြစ်နေ၍ ရှင်းမပြတော့ပါဘူး...!ကျွန်တော် 64 Bit&32 Bit နှစ်ခုလုံးကို တင်ပေးထားပါတယ်...! လိုချင်ရင်တော့ အောက်မှာ Media Fire လေးဖြင့်တင်ပေးထားပါတယ်...!
"ဒီမှာယူသွားပါ..." Win 64 Bit VLC Player...!
"ဒီမှာယူသွားပါ..." Win 32 Bit VLC Player...!
အသိပညာ အတက်ပညာ တိုးပွားနိုင်ပါစေ...!
No Response to "VLC-2.1.0-win64 Bit&win32 Bit...!"